Mpanamboatra sy mpamatsy akora fikarakarana manokana - orinasa mpanamboatra akora fikarakarana manokana ao Shina
Akora fikarakarana manokana
Dipalmitate Acid Kojic
Andian-tsarimihetsika PVP K
Copolymer PVM / MA
Ny sira mifangaro poly (Methylvinylether / Maleic Acid)
Poly (MethylvinyletherMideic Acid) Copolymer antsasaky ny Esters
Akora mihetsika hafa
Keratin vita hydrolyzed
Peptide Collagen trondro
Lactose fanamainana famaohana
Ranoka mandevon-javatra / Intermediates
Tetra-Fanjaitra Toy ny Zisidran'ny Oksida Zinc
DL-Panthenol dia humectants tsara, miaraka amin'ny endrika vovoka fotsy, mety levona amin'ny rano, alikaola, propylene glycol. Ny D-Panthenol dia fantatra amin'ny anarana hoe Provitamin B5, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny metabolisma mpanelanelana amin'ny olombelona. Ny tsy fahampian'ny otrikaina B5 dia mety miteraka aretina Dermatological maro. DL-Panthenol dia ampiharina amin'ny ankamaroan'ny karazam-panomanana kosmetika. Ny D-Panthenol dia mikarakara volo, hoditra ary hoho. Ao amin'ny hoditra, DL-Panthenol dia humectants lalina miditra. D-Panthenol dia afaka mandrisika ny fitomboan'ny epithelium ary manana ny ...
DL-Panthenol 50% dia humectants tsara, tsy misy loko ny ranoka viscous mavo mavo, mety levona anaty rano, toaka, propylene glycol. Ny D-Panthenol dia fantatra amin'ny anarana hoe Provitamin B5, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny metabolisma mpanelanelana amin'ny olombelona. ny Vitamin B5 dia mety hiteraka fikorontanan'ny dermatolojika maro. DL-Panthenol dia ampiharina amin'ny ankamaroan'ny karazam-panomanana kosmetika. Ny D-Panthenol dia mikarakara volo, hoditra ary hoho. Ao amin'ny hoditra, DL-Panthenol dia humectants lalina miditra. D-Panthenol dia afaka mandrisika ny Gro ...
DL-Panthenol 75% dia humectants lehibe, tsy misy loko ny ranoka viscous mavo mavo, mety levona anaty rano, toaka, propylene glycol. Ny DL-Panthenol dia fantatra amin'ny anarana hoe Provitamin B5, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny metabolisma mpanelanelana amin'ny olombelona. ny Vitamin B5 dia mety hiteraka fikorontanan'ny dermatolojika maro. DL-Panthenol dia ampiharina amin'ny ankamaroan'ny karazam-panomanana kosmetika. Ny D-Panthenol dia mikarakara volo, hoditra ary hoho. Ao amin'ny hoditra, DL-Panthenol dia humectants lalina miditra. D-Panthenol dia afaka mandrisika ny Gro ...
Ny D-Panthenol dia tsiranoka azo avy amin'ny asidra pantothenika ary novolavolaina manokana ho an'ny lozisialy. Azo levona anaty rano, mora levona amin'ny alikaola, mety levona ao amin'ny glycerol, mety levona kely amin'ny ether, tsy azo avela amin'ny menaka legioma, menaka mineraly ary tavy. Parameter teknika fototra: Ny famantarana A dia mifanaraka amin'ny USP Identification B Mifanaraka amin'ny USP Identification C Mifanaraka amin'ny fisehoana USP tsy misy loko, viscous ary mazava ranoka Assay (fototra Anhydrous) 98.0% ~ 102.0% Speci ...
Ny D-Panthenol 75% dia tsiranoka azo avy amin'ny asidra pantothenika ary novolavolaina manokana ho an'ny fampiharana topical. Azo levona anaty rano, mora levona amin'ny alikaola, mety levona amin'ny glycerol, mety levona kely amin'ny ether, tsy mety solon'ny legioma, menaka mineraly ary menaka . Parameter teknika fototra: fisehoana tsy misy loko, Viscous ary rano mazava Famantarana fihetsika tsara Assay (HPLC) 75.0 ~ 78.5% Rano (Karl Fischer) Tsy mihoatra ny 0,1% fihodinana optique manokana + 29 ° ~ + 31.5 ° Am ...
D-Calcium Pantothenate dia sira calcium ao amin'ny vitamina B5 mety levona amin'ny rano, hita eny rehetra eny amin'ny zavamaniry sy sela biby misy fananana antioksida. Pentothenate dia singa iray ao amin'ny Coenzyme A ary ampahany ao amin'ny kompana Vitamin B2. Ny vitamina B5 dia singa iray mitombo ary tena ilaina amin'ny fiasa metabolika isan-karazany, ao anatin'izany ny fatran'ny gliosida, proteinina ary asidra matavy. Ity vitamina ity koa dia tafiditra ao amin'ny fitambaran'ny lipida kolesterola, ny neurotransmitter, ny hormonina steroid ary ny hemoglo ...
Ascorbyl Tetraisopalmitate, antsoina koa hoe Tetrahexyldecy Ascorbate, molekiola iray azo avy amin'ny vitamina C sy asidra isopalmitic. Ny vokatry ny vokatra dia mitovy amin'ny an'ny vitamina C, ny tena zava-dehibe dia ny mahavita manao «antioksidant». Ascorbyl Tetraisopalmitate dia mampihena ny famokarana mpiasan'ny oxidizing, izay mandray anjara amin'ny fahasimban'ny sela aorian'ny fihanaky ny loza UV na ny simika. Ary, appea volo amin'ny hoditra ...
Biotin antsoina koa hoe D-Biotin, Vitamina H, Vitamina B7, fotsy na efa ho fotsy, vovobony kristaly na kristaly tsy misy loko, somary mety levona anaty rano, alikaola, azo ampiharina tsy misy fotony ao amin'ny acétone. Miparitaka amin'ny vahaolana maloto amin'ny Alkali Hydroxides. Famaritana ara-teknika manan-danja fisehoana vovoka fotsy na fotsy (A, B, C) mifanaraka amin'ny USP Assay 97,5% ~ 100,5% fahalotoan'ny fahalotoan'ny isam-batan'olona: tsy mihoatra ny 1.0% ny loto rehetra: tsy mihoatra ny 2.0% fihodinana manokana + 89 ° ~ + 93 ° Resi ...
Coenzyme Q10 dia tafiditra ao amin'ny mitochondria amin'ny famokarana angovo sela. Izy io koa dia misy fiantraikany amin'ny antioxidant, be mpampiasa amin'ny fisiolojika, fivarotam-panafody, kosmetika ary fiarovana ara-pahasalamana. Vovoka kristaly mavo na maivana izy io, tsy misy fofona, tsy misy tsirony, mora levona ao amin'ny chloroform, benzene ary carbon tetrachloride; soluble in acétone, aether, petrole ehter; mety levona kely amin'ny etanol; tsy afa-mivoaka anaty rano na methanol.Havaha ho lasa singa mena ao anaty hazavana, ...
Ny magnesium Ascorbyl Phosphate dia vitaminina C azo avy (asidra L-Ascorbic mono-dihydrogen phosphate magnesium phostatate) izay tsy manimba ny raikipohy misy rano. Amin'ny vokatra fikolokoloana ny hoditra, ny magnesium Ascorbyl Phosphate dia ampiasaina ho fiarovana sy fanamboarana, famokarana collagen, manazava sy mamiratra ny hoditra ary toy ny anti-mamaivay.Izany koa dia antioxidant mahery.Izany dia heverina ho mpitsabo manadio ahy tsy manelingelina izay manakana ny sela hoditra hamokatra melanin sy hazavana ...
Sodium Ascorbyl Phosphate derivative of vitamina C, vitamina C dia mifototra amin'ny siansa maoderina sy ny teknolojia ho an'ny fanodinana akora vita amin'ny fampiasana an'io vokatra io, na am-bava na tafiditra amin'ny alàlan'ny hoditra ao anaty vatana, dia azo levonina haingana amin'ny phosphatase hanafaka vitamina C, vitamina C dia milalao asa ara-batana sy biolojika miavaka.Sodium Phosphate Vitamin C Vitamin C dia manana ny fahombiazan'ny roa tonta. Ny vitamina C koa dia mandresy ny mora tohina amin'ny iôna maivana sy hafanana ary metaly, mora ...
Ny Kojic Acid dia fantatra amin'ny anarana hoe 5- hydroxyl -2- hydroxymethyl -1 sy 4- piranone. Izy io dia fitambarana voajanahary misy asidra malemy namboarina tamin'ny alàlan'ny fanatsobanana ny zavamiaina bitika. mora levona anaty rano, alikaola ary acétone, mety levona kely amin'ny ether, etil acétate, chloroform ary pyridine, tsy mety levona amin'ny benzene; ny refy molekiola dia ny C6H6O4, ny lanjan'ny Molecular142.1, ny teboka miempo153 ～ 156 ℃. Famaritana ara-teknika manan-danja fisehoana fotsy na fotsy kristaly toy ...